बुधबारको नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको शक्ति पदर्शनमा कसले के भने ? - Rastriya Yuvajagaran Nepali News
होमपेज धर्म/संस्कृति बुधबारको नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको शक्ति पदर्शनमा कसले के भने ?
बुधबारको नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको शक्ति पदर्शनमा कसले के भने ?
२९ माघ २०७७, बिहीबार ०९:३९
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहले संसद् विघटनमार्फत संविधानको हत्या गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रलाई खतरामा पारेको आरोप लगाएको छ ।
बुधबार राजधानीमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै सो समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले संविधान मिच्ने, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने र जनअधिकार कुल्चनेलाई जनताले ललकार्ने बताउँदै ओली लोकतन्त्रको हत्या गर्ने अपराधी चरित्रको भएको आरोप लगाएका हुन् । उनीहरूले विरोध सभामार्फत लोकतन्त्र, संविधान र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि आफूहरू सडकमा आएको जनाउ दिएका छन् । ‘यो कुनै पदको लडाइँ होइन, कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने वा कुर्सीको लडाइँ होइन । यो केपी प्रवृत्तिविरुद्धको लडाइँ हो, लोकतन्त्र, संविधान र स्वतन्त्रता रक्षाको लडाइँ हो’, दुवै अध्यक्षले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेर संविधानको हत्या गरेको तथा प्रतिगमनमार्फत निरंकुश शासन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै दुवै अध्यक्षले ओली प्रवृत्ति कहाँबाट जन्म्यो, हुक्र्यो, त्यसबारे आत्मसमीक्षा गर्ने उद्घोष गरे । दुवै अध्यक्षले संसद् पुनस्र्थापनाको विकल्प नभएको र संसद् पुनस्र्थापना नभए नेपाली जनताले ठूलो आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिए ।
आमसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीको ‘लोकतन्त्रको हत्या गर्ने अपराधी चरित्र’ नेपाली जनताले बुझिसकेको बताए । उनले निर्णय जनताको पक्षमा नआए आँधीहुरी आउने दाबी गरे । ‘आँधीहुरी आउँछ कसैले थाम्न सक्दैन । हामी सानो समूहले विद्रोह गर्दा पहिला के भयो रु अहिले लाखौं जनता सडकमा उत्रे के हुन्छ ’, दाहालले प्रश्न गरे । ओलीको चरित्रमा सुधार नआए सिंहदरबार र बालुवाटार घेरिने उनको भनाइ थियो । ‘आज हामीले आयोजना गरेको समाभा ५ लाख मानिस उपस्थित भएको अनुमान छ । केपी ओलीले केही दिनअघि सभा कस्तो हुन्छ हामी देखाउँछौं भनेर भन्नुभएको थियो । केपीजी देख्नुभयो सभा कस्तो हुन्छ रु देख्नुभयो विरोध र प्रदर्शन कस्तो हुन्छ रु अझै पनि लाखौं जनताको यो उपस्थिति देख्नुभएन भने म तपाईंलाई चुनौती दिन चाहन्छु, हेर्नुहोला, केही दिनपछि सिंहदरबार र बालुवाटार घेर्न लाखौंलाख जनता आउनेछन्,’ अध्यक्ष दाहालले भने । उनले ओलीलाई ठग भएको आरोपसमेत लगाए । ओलीले चितवनलाई रामको जन्मभूमि भनेको सन्दर्भ जोड्दै दाहालले भने, ‘ओली, त्यो नाटक हो । मैले ३ वर्षमा ओलीलाई चिनिसकें । वैज्ञानिक अनुसन्धान गरौं, म चुनौती दिन्छु ।’
दाहालले प्रतिगमन, निरंकुशता र लोकतन्त्रको हत्या गर्ने केपी ओली चरित्र जनताले बुझिसकेकोले जरुरी प¥यो भने बालुवाटार र सिंहदरबार घेर्ने ठूलो आमसभा हुने चेतावनी दिएका थिए । ‘अझै पनि लाखौं जनताको उपस्थिति र यो विरोध, आक्रोश, आवेग, पीडालाई बुझ्नुभएन भने म तपाईंलाई चुनौती दिन्छु, सिंहदरबार घेर्न र बालुवाटार घेर्न आउनेछन्, प्रतिगमन, निरंकुशताको पक्षधर, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने तपाईंको चरित्र जनताले बुझिसकेको छ’, दाहालले भने ।
अध्यक्ष दाहालले निर्वाचन आयोगको लक्षण गतिलो नदेखिएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले थर्काएपछि निर्वाचन आयोगले गतिलो लक्षण नदेखाएको बताउँदै दाहालले थपे, ‘निर्वाचन आयोगले राम्रो लक्षण देखाइरहेको छैन । ७० प्रतिशतको बहुमत देखाउँदा हिसाब नगर्ने तर केपीले गएर धम्क्याउने बित्तिकै लत्रिने रु कसैले सामान्य नठाने हुन्छ, खेलाँची कसैले नठाने हुन्छ ।’ ७० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हिसाब नगरी केपीले धम्क्याउन बित्तिकै त्यसैको लहैलहैमा आयोगले लक्षण राम्रो नदेखाएको उनको भनाइ थियो ।
आमसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्का अध्यक्ष नेपालले मदन भण्डारीको नाम बिर्सिएर ओलीले पशुपतिनाथको मन्त्र जप्दै हिँडेको बताए । पशुपतिनाथले अपराधीलाई माया नगर्ने भएकाले पशुपतिनाथको शरणमा जानु बेकार भएको समेत उनले बताए । ‘केपीजी, तपाईंले मदन भण्डारीको नाम जप्ने गर्नुहुन्छ । अब मदन भण्डारीको नाम बिर्सेर पशुपतिनाथको मन्त्र जप्न सुरु गर्नुभएको छ । पशुपतिनाथले देशमा असल काम गर्छ, जसले धर्म गर्छ उसलाई मात्रै राम्रो गर्छन् । जसले पाप गर्छ उसलाई पशुपतिले पनि राम्रो गर्दैनन् । केपी ओलीलाई यो कुरा चेतना भया, संविधान मिच्ने मिचाहा, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने हत्यारा र जनअधिकार कुल्चनेलाई हेर्दैनन्,’ अध्यक्ष नेपालले भने ।
उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो अध्यक्ष केपी ओली नभएको जिकिर गर्दै विधान र दस्तावेजमा कहीं पनि पहिलो र दोस्रो अध्यक्षको व्यवस्था नभएको दाबी गरे । ‘कुनै विधानमा पहिलो र दोस्रो अध्यक्षको व्यवस्था छैन । केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट ओलीलाई हटाइसकिएको छ’, अध्यक्ष नेपालले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार निर्वाचन आयोगमा गएर चुनावी प्रक्रिया सुरु भइसकेको हुँदा आयोगले अब कुनै पार्टीको पनि विवादमा प्रवेश गर्न नहुने भनी दिएको अभिव्यक्तिको समेत नेपालले आलोचना गरे । ‘अस्ति निर्वाचन आयोगलाई धम्क्याएर के भने भने म पहिलो अध्यक्ष हुँ, पहिलो अध्यक्ष नेकपाको होइन, ओली गुटको होला, बालकोटको होला, नेकपाको पहिलो अध्यक्ष केपी ओली होइनन्, उनलाई पुस ७ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले हटाइसकेको छ’, अध्यक्ष नेपालले भने । उनले आफू पहिलो अध्यक्ष भन्ने ओलीको दाबीको कुनै अर्थ नभएको बताए । पार्टीको विधान, सर्कुलर र निर्णयलगायत कुनै पनि दस्तावेजमा ओलीलाई पहिलो अध्यक्ष भनेर नलेखिएको नेपालको भनाइ छ ।
‘ओलीले आफैं म पहिलो अध्यक्ष भनेर हुँदैन, कुनै पनि दस्तावेजमा उनलाई पहिलो अध्यक्ष भनेर लेखिएको छैन,’ नेपालले भने । अध्यक्ष नेपालले जारी पार्टीको आधिकारिकता विवाद पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बहुमतका आधारमा टुंग्याउनुपर्ने बताए । ‘हाम्रो पार्टीका ४४० जना केन्द्रीय सदस्यलाई मार्चपास गराऊँ, ओलीको पक्षमा १०० जना हुनेछन् भने हाम्रो पक्षमा ३०० जना,’ अध्यक्ष नेपालले भने । निर्वाचन कानुनले नै एउटै पार्टीभित्र नाम, चिन्ह वा छाप आदिबारे विवाद भयो भने बहुमतको आधारमा निर्णय हुने लेखेको बताउँदै नेपालले आयोगले सोहीअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ओली प्रतिगमनका प्रतीक भएको र ज्ञानेन्द्र पथमा अगाडि बढिरहेको आरोप लगाउँदै नेता नेपालले ओलीलाई गणतन्त्र र संघीयताको माया नभएको दाबी गरे ।
अध्यक्ष नेपालले देशमा बलात्कारका घटना बढेको भन्दै बलात्कृत भएका चेलीहरूलाई ओलीले न्याय दिन नसकेको र ओलीलाई धिक्कारेको आरोपसमेत लगाए । ‘केपी ओलीको शासनकालमा ७ हजार १७० नेपाली चेली बलात्कृत भएका छन् । ती चेलीहरूको आत्माले भनिरहेको छ, ओली तिमीले बलात्कारीमध्ये कतिजनालाई सजाय दिएका छौ रु तिमीजस्ता मान्छेलाई पार्टीले त्यो पदमा पुर्‍यायो तर तिमीले लोकतन्त्र समाप्त पार्न लागेका छौ । तिमीलाई धिक्कार छ । आम नेपाली जनताले भनेका छन्, केपी ओलीलाई धिक्कार छ । पशुपतिनाथले पनि भन्लान् केपी ओलीलाई धिक्कार छ,’ अध्यक्ष नेपालले भने ।
उनले आफूहरूले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन वा कुर्सीका लागि यो आन्दोलन नगरेको, कोही व्यक्तिप्रति लक्षित नगरेको र ओली प्रवृत्तिविरुद्ध भएको स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले देशभरबाट केपी ओली समूहको पराजय सुरु भएको दाबी गरे । उनले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुने र त्यसपछि गरिने आमनिर्वाचनबाट ओली समूह पराजित हुने दाबीसमेत गरे । खनालले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध सिंगो देश आन्दोलित भइरहेको बताए । ओलीले प्रतिगमन नसच्याए ०६२र६३ भन्दा ठूलो अन्दोलनको आगो दन्किने उनको भनाइ थियो । ‘पत्रकारहरू आन्दोलित भएका छन्, नागरिक समाज आन्दोलित भएको छ । यो अन्दोलन सुनिएन भने ०६२र६३ को जनाआन्दोलनभन्दा ठूलो आगो दन्किनेवाला छ । त्यो अन्दोलनको आगोले केपी ओलीको तानाशाहीलाई समाप्त पार्नेछ,’ खनालले भने ।
पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओली ‘फासीवादी’ भएको आरोप लगाए । ‘केपी ओली फासिस्ट हुन् । केपी ओलीले नेपालमा फासिवादको अभ्यास गर्दैछन् । हामी नेपालमा कुनैपनि हालतमा फासीवाद सहने छैनौं,’ उनले भने । संविधानविरोधी चुनाव नचाइएको उनले बताए । ‘संविधानविरोधी चुनाव हामीलाई चाहिएको होइन । यो चुनाव केपी ओलीले वास्तवमा गर्नका लागि घोषणा गरेका होइनन् । संविधान र लोकतन्त्रविरोधी चुनावको हामी धज्जी उडाउँछौं,’ उनले भने । नेता श्रेष्ठले संयुक्त आन्दोलनका लागि जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली कांग्रेसलगायतका राजनीतिक दलसँग छलफल गरिरहेको समेत बताएका थिए ।
कार्यक्रममा स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री केपी ओली जिउँदा जनता बिर्सेर पशुपतिनाथलाई खुशी पार्न लागेको बताए । ‘हरेक भाषण र मन्तव्यको अन्त्यमा पशुपतिनाथ गुहार्ने राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो, पशुपतिले बचाएनन्, त्यसैगरी हरेक सम्बोधनको अन्त्यमा पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन् भन्ने ज्ञानेन्द्र नारायणहिटीबाट नागार्जुन पुग्नुपर्‍यो,’ पन्तले भने । ओलीले पनि पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलारी बनाएर पशुपतिनाथलाई खुसी पार्नुभन्दा बोल्ने जनताको पीडा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो तराईका गरिब जनता शीतलहरमा कठ्याङ्ग्रिरहेका र पहाडमा गरिबीका कारण बालबच्चासहित महिलाले नदीमा हाम फालेका बताउँदै पन्तले प्रधानमन्त्री ओलीले भने देशमा कसैले खान नपाएर मर्नुनपरेको बताएर प्रहरसन गरिरहेको टिप्पणी गरे ।
ओलीले धेरै विकास गरेको भाषण गर्ने गरेको र भाषणकै क्रममा दाहाल–नेपालले काम नै गर्न नदिएको बताएर थप प्रहसन गरेको पन्तको भनाइ थियो । कार्यक्रममा स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले शान्तिपूर्ण आवाज नसुनिए जनता कुनै पनि बेला विद्रोहमा उत्रन सक्ने बताए । ‘जनताको आवाज सुनिँदैन भने आज यहाँ भइरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन कुन दिन विद्रोहमा उत्रनेछ म भन्न सक्दिन,’ उनले भने । विरोध सभामा मुखमा टेप लगाएर उपस्थित भएकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले लोकतन्त्रमा बोल्न कोही कसैले नरोक्ने बताइन् ।
राष्ट्रपतिजस्तो संस्थाको साख गिराउने काम भएकाले आफूले राष्ट्रपति पदमा रहेकी विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध बोलेको उनले बताइन् । निर्वाचन प्रक्रियाबाट राष्ट्रपतिजस्तो पदमा पुगेर निरंकुशताको साक्षी बस्न थालेपछि आफूले त्यसविरुद्ध बोलेको उनले बताइन । ‘राष्ट्रपतिजस्तो संस्थामा कुनै व्यक्तिले निर्वाचनको प्रक्रियाबाट गएर निरंकुशताको साक्षी बस्छ भने त्यस्ता पात्रको विरुद्धमा बोल्न पाइन्छ । कसले भन्छ बोल्न पाइँदैन भनेर,’ उनले भनिन् ।
अघिको समचार पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७७ माघ २९ गते (सन् २०२१ फरवरी ११ तारिख) विहीबार
अर्को समचार ११ औं वैवाहिक वर्षगाँठ मनाउँदै गरेकी नेतृ झाक्री घरबाटै पक्राउ